वजन कम गर्न जब कार्ब्स खाने बारे जान्नुहोस् - व्यक्तिगत विकास क्याफे
वजन कम गर्न जब कार्ब्स खाने बारे जान्नुहोस्
पोस्ट व्यवस्थापक | जुन 7, 2018 | आहार र पोषण, स्वास्थ्य र कल्याण, वजन घटाउने सल्लाह |0|
1 कार्बोहाइड्रेट वा कार्बहरू के हुन्?
1.1 साधारण बनाम जटिल कार्बोहाइड्रेट
त्यहाँ कार्ब्स र तौल घटाउने वरिपरि यति धेरै भ्रम छ - के हामीले त्यसलाई खानु पर्छ? हामीले ती कहिले खानुपर्दछ? कुन कार्ब्स राम्रो वा नराम्रो? तर वास्तवमै यो एकदम सरल छ।
कार्बोहाइड्रेट वा कार्बहरू के हुन्?
कार्बोहाइड्रेट शरीरको मुख्य उर्जा स्रोत हुन्। यसले हाम्रो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई उर्जा दिन्छ, हाम्रो मस्तिष्क र मेरुदण्डको साथसाथै हाम्रो शरीरमा मांसपेशीहरू पनि उर्जा दिन्छ। हाम्रो मांसपेशी भित्र कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेनको रूपमा भण्डार गरिएको छ जुन जब हामी कुनै प्रकारको व्यायाम गर्छौं तब प्रयोग हुन्छ। जब ग्लाइकोजेन स्टोरहरू खालिन्छन् शरीरलाई फेरि यसको लागि चिनी चाहिन्छ।
यदि तपाईं प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तौल घटाउनु, कार्बोहाइड्रेट खानको लागि उत्तम समय तपाईंले व्यायाम गरिसके पछि हो। यो तब हुन्छ जब तपाईंको शरीर चिनीको लागि चिच्याइरहेको छ र यसलाई फ्याटको रूपमा भण्डार गर्दैन। दिनमा जब तपाईं कम व्यायाम गरिरहनु भएको छ भने तपाईं यति धेरै कार्बोहाइड्रेटहरू खानबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो दिन कार्बोहाइड्रेट युक्त ब्रेकफास्टको साथ सुरु गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ त्यसैले तपाईंसँग दिनभर यसलाई जलाउने समय छ।
यसले भन्यो, कुन प्रकारको कार्बोहाइड्रेट तपाईंले खानुहुन्छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
साधारण बनाम जटिल कार्बोहाइड्रेट
त्यहाँ कार्बोहाइड्रेटका दुई प्रकार छन्: सरल र जटिल। यी दुई बीचको भिन्नता भनेको तिनीहरू कसरी पचाउँदछन्।
साधारण कार्बोहाइड्रेट भनेको चिनी हो जुन शरीरले चाँडो पचाउँछ। तिनीहरू अक्सर एक मीठो स्वाद दिनको लागि खानामा थपिन्छन् र फलफूलमा स्वाभाविक रूपमा देखा पर्छ।
धेरै प्रशोधित खाद्य पदार्थ र अन्नका चीजहरूमा चिनी थपिएको छ तर, ऊर्जाबाट अलग यी शर्कराहरूको कुनै पौष्टिक मूल्य हुँदैन। साधारण कार्बोहाइड्रेट्सले रगतमा चिनीको मात्रा बढाएर स्पाइक र डुब्न लगाउँदछ, यसले तपाईंलाई भोकमरी महसुस गरिरहेको छ। यदि तपाईं वजन घटाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले सकेसम्म साधारण कार्बोहाइड्रेटहरू बेवास्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
जटिल कार्बोहाइड्रेट्स शरीरले धेरै सुस्त पचाउँछ। स्रोतहरूले ओट्स, चामल, क्विनोआ र मीठो आलु समावेश गर्दछ। जटिल कार्बोहाइड्रेटले शरीरलाई पचाउनको लागि लामो लिन्छ र यसले तपाइँलाई लामो समयको लागि फुलर महसुस गर्न छोड्छ। यदि तपाईं तौल घटाउन चाहानुहुन्छ भने आफ्नो दिन ओट्स वा राई रोटीको साथ सुरू गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, दिउँसोको खाजाको लागि तपाईं मिठो आलु, चामल वा सम्पूर्ण पास्ता वरपरको खाना बेस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि बेलुकाको बेलुकाको बेलुकाको खाना खानुपर्नेछ।
यदि तपाईं तुलनात्मक रूपमा सक्रिय राख्नुहुन्छ र सही कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पोषकहरूबाट तौल घटाउनु हुँदैन। तपाईं लामो समयको लागि पूरक महसुस गर्नुहुनेछ र दिनभरि जान जारी राख्नको लागि प्रशस्त ऊर्जा हुनेछ।
पछिल्लोमुश्किल अन्तरवार्ता प्रश्नहरूको सामना गर्दै तपाईंलाई सोधिनेछ
अर्कोएक प्रतिस्पर्धा आधारित साक्षात्कार कसरी पुग्ने
सुपरफूड्स अन्वेषण - मोरिa्ग के हो?
१० बिभिन्न योग शैलीहरू वर्णन गरियो
ठुलो सोच्नुहोस् र जो सुन्नुहुन्छ उनीहरूलाई सुन्नुहुन्न जसले यो गर्न सक्नुहुन्न। सानो सोच्नको लागि जीवन छोटो छ।
- टिम फेरिस